परपीडाको कुलत ~ brazesh
November 13, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
हुन त बस, ट्रक तथा अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनहरू उटपट्याङ् र बकम्फुसे मुक्तक तथा उक्तिहरूका लागि बदनाम छन्। तर, कहिलेकाहीँ आक्कलझुक्कल तिनमा साह्रै गहिरा कुराहरू पनि पोतिएका भेटिन्छन्। केही दिनअघि एउटा ट्रकमा त्यस्तै कुरा देखियो। त्यसमा लेखिएको थियो, "मान्छे आफ्नो सुखमा भन्दा अरूको दुःखमा बढी खुसी हुन्छ।"
घोरएिर सोच्दा त्यसमा हाम्रो जीवनको एउटा कटु यथार्थ अभिव्यक्त भएजस्तो लाग्यो। अधिकांश मानिसमा वास्तवमा नै यो प्रवृत्ति हुन्छ। एकपटक तीन जना अत्यन्त दुःखी मानिसहरू जंगलमा कठोर तपस्या गर्न गए। निकै लामो समयपछि भगवान् प्रकट भए। पहिलो मान्छेलाई उनले वरदान माग्न भने।
"भगवान् ! मलाई अरू केही चाहिन्न, संसारभरको खुसी दिनूस्। म सदैव प्रसन्न रहन चाहन्छु।"
भगवान्ले तथास्तु भन्नासाथ त्यो मान्छेको अनुहारमा प्रसन्नताका यस्ता धर्साहरू कोरएि, त्यसले गर्दा ऊ दिव्य देखियो। भगवान् अब दोस्रो मान्छेतिर उन्मुख भए। श्रीसम्पत्ति, धनधान्य र सुन्दर जीवनसाथी माग्न तपस्या गरेको त्यस मान्छेले एकछिन घोरएिर भन्यो, "भगवान् ! मलाई पनि अघिको मान्छेलाई जस्तै प्रसन्नता दिनूस्।"
दोस्रो मान्छेकोे अनुहार पनि चमचमाउँदो भयो। अब तेस्रो मान्छेको पालो थियो। निकैबेर घोत्लिएर उसले भन्यो, "यी दुवै जनालाई पहिलेकै जस्तो दुःखी बनाइदिनूस्।"
अधिकांश मान्छेहरूमा यस्तै प्रवृत्ति हुने गर्छ। मान्छे भन्ने जीव बनाउने बेला प्रकृतिले रसिराग, वैरभाव, प्रतिस्पर्धाको भावना, डाहजस्ता कुराहरू फिल्टर गर्न सकेको भए निःसन्देह यो सृष्टिको सर्वोत्तम सिर्जना हुन्थ्यो होला। यस संसारमा जेजति नराम्रा कुुराहरू भएका छन्, ती सबैका पछाडि मान्छेको यही बानी नै प्रमुख कारण रहेको छ। यी कुराहरूलाई जित्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ भनेर हरेक युगमा, हरेक समयमा कसैले न कसैले भनिरहेका नै हुन्छन् तर मान्छेले आदिम युगदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पनि त्यसो गर्न सकेन। एउटा लामो धर्कालाई छोटो बनाउन भन्यो भने सबैजसो मान्छेले त्यसलाई मेटाउँछन्। धेरै कम यस्ता मान्छे हुन्छन्, जसले त्यो धर्काको मुनि त्यसभन्दा लामो अर्को धर्का कोर्छन्। जिन्दगीका हरेक मोडमा पनि मान्छे यही नै गररिहन्छन्। अरूले कोरेका धर्कालाई मेटाउनमै शक्ति खर्च गररिहन्छन्। अरूको आगोमा आफ्नो हात सेक्न मान्छेलाई किन त्यति धेरै रमाइलो लाग्छ कुन्नि ! अरूका बीचमा फाटो ल्याउनका लागि मान्छेले निकै परश्रिम गर्छन्। दुई जनाको बीचमा भ्रम र असमझदारी पैदा गर्ने मान्छेको निकै नै लोकपि्रय खेल हो। त्यति जान्दाजान्दै पनि हामी आफैँ पनि बेलाबेला यो खेलको सिकार बन्न पुग्छौँ। कसैले तेरो कान कागले लग्यो भन्दा पहिले कान नछामी कागको पछि कुद्ने मूर्खता हामी सबैले कुनै न कुनै बेला गरेको हुनुपर्छ।
अरूको झगडा वा दुःखमा मानिसलाई कति रमाइलो लाग्छ भन्ने कुरा ठम्याउन धेरै पर जानु पर्दैन। बाटोमा दुई जनाको झगडा परेको छ भने हामी कामै छोडेर भए पनि उभिएर त्यो हेर्छौं। छिमेकमा दुई जनाको विवाद र भनाभन भएको छ भने त्यहाँ दर्शकको भीड नै लाग्छ। अरू त छोडौँ, ट्राफिकले कुनै सवारी चालकको अनुमतिपत्र कब्जा गरेको ठाउँमा पेटीमा हिँड्ने पनि ठाउँ हुँदैन। अचेल टेलिभिजनमा 'रयिालिटी सो'का नाममा थुप्रै पूर्वनियोजित कार्यक्रमहरू आउने गर्छन्। तीमध्ये अधिकांशमा एउटै कुरा समान हुन्छ, झगडा र विवाद। प्रतिस्पर्धीका बीचमा झगडा, निणर्ायकहरूका बीचमा झगडा, सबैको सबैसँग झगडा। जुन कार्यक्रममा जति बढी झगडा भयो, त्यसको दर्शक संख्या त्यति नै धेरै हुन्छ। भोलिपल्ट जमघटहरूमा त्यसैको चर्चा बढी हुन्छ। मानिस परपीडामा रमाउँछ। परपीडाको खेल खेल्छ। पहिले जनावर र पंक्षी लडाएर मनोरञ्जन लिने मान्छे सभ्य, विकसित र सुुसंस्कृत भए पनि अझै कुस्ती, मुक्केबाजी, कराँते, विभिन्न नाममा एउटा मान्छेले अर्कोलाई झम्टिने, हिर्काउने, ढाल्ने, पछार्ने र रगतपच्छे बनाउने खेलहरूमा रमाउँछ। तिनै खेलका लागि अर्बौं खर्च गर्छ। मान्छे परपीडामा नरमाउने भए चिन्नु न जान्नुका दुई जना बिनाकुनै कारण एकअर्कालाई भकुर्ने र तिनलाई अझ बढी हिंस्रक बनाउन हजारौँ मान्छे थपडी बजाइबजाई रमाउने कुराहरू खेलका रूपमा चल्दैन थिए होला।
घरपरविारमा, साथीहरूको बीचमा, काम गर्ने थलोमा हरेक ठाउँमा मानिसले आफँैजस्तो अरू मान्छेहरू भेटिरहन्छ। यी हरेक ठाउँमा यो खेल चलिरहेको हुन्छ। हुन त एउटा भनाइ छ, मान्छेलाई दुईवटा कान तर एउटा मात्र मुख दिएको जति बोल्छौ, त्यसको दोब्बर सुन्ने गर भन्नका लागि हो रे ! तर, सुन्ने के, कति र पत्याउने कति भन्ने कुरा मान्छेले सिक्न सकेन भने त्यो मान्छे सुखी हुन सक्दैन। कसैले आफ्नाबारेमा यसो भन्छ वा आफ्नो विरोधमा उसो गर्छ भनेर सुनेपछि हामीमध्ये कतिले त्यो कुराको यथार्थ पहिल्याउने प्रयास गर्छौं? सम्बन्धित मानिससँग ठाडै त्यो कुराको छिनोफानो नगरेर महिनौँ, वर्षौं वा जीवनभर मनमा तुष लिएर पनि हामी बाँच्ने गर्छौं।
तर, मान्छेलाई परपीडामा रमाउने कुलत लागिसकेको छ। यो कुलतले गर्दा हामीभित्र नजानिँदो गरी परपीडा कसरी दिने भन्ने सोचले पनि काम गर्न थालिसकेको हुन्छ। दर्शनले भन्छ, कुलत भनेको नरम बिछ्यौनाजस्तो हुन्छ, त्यसमा हाम फाल्न सजिलो हुन्छ तर त्यसबाट निस्कन गाह्रो। त्यसैले वैरभावको ठाउँमा सद्भाव, इष्र्याको ठाउँमा कदर, क्रोधको ठाउँमा आदर र आवेगको ठाउँमा हामीले शान्तिजस्ता कुराहरूलाई राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अरूको पीडामा नरमाउने बानी चाह्यौँ भने लगाउन नसकिने कहाँ हो र?